पिसा को टावर | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | मार्गदर्शकहरू, इटाली
मानिस जहिले पनि माथितिर निर्माण गर्न मनपराउँदछ र संसार निर्माणले भरिएको छ कि आकाशलाई खार्न वा बादलसम्म पुग्न प्रयास गर्दछ। खुल्ला इटाली, सबैभन्दा प्रसिद्ध टावर मध्ये एक हो पिसाको टावर। मलाई लाग्दैन कि त्यहाँ धेरै मानिसहरु छन् जसले उसलाई चिन्दैन।
भ्रमण गर्नुहोस् पिसाको झुकाव टावर यो क्लासिक हो जब एक इटाली यात्रा गर्दछ। थोरै आगन्तुकहरूले यसलाई मिस गरेका छन् यदि तपाईं अहिलेसम्म हुनुहुन्न भने तर यो तपाईंको योजनाहरू बीचमा छ… यो जानकारी लेख्नुहोस् र रमाउनुहोस्!
1 पिसामा पिसाको टावर
2 पिसाको टावर
पिसामा पिसाको टावर
पिसा टस्कनी क्षेत्रको शहर होमध्य इटालीमा, उही नामको प्रान्तको राजधानी। लगभग एक लाख मानिसहरु त्यहाँ बस्छन् र यद्यपि टावर यसको सबै भन्दा लोकप्रिय प्रतीक हो धेरै अन्य पुरानो आकर्षण छ। थप रूपमा, यो १२ औं शताब्दीको पिसा विश्वविद्यालय र स्कूओला नर्मले सुपीरियरको पसि विश्वविद्यालयमा रहेको छ, जुन नेपोलियन आफैले स्थापना गरेका थिए।
छ subtropical र भूमध्य जलवायु यसैले यसको जाडो चिसो र गर्मिहरु एकदम तातो छ। गर्मी को बारे मा राम्रो कुरा यो भन्दा सुक्खा छ। यदि तपाईंलाई वर्षा मनपर्दैन भने तपाईंले शरदबाट बच्नु पर्छ।
रोम र पिसा बीचको दूरी 355 XNUMX किलोमिटर छ त्यसैले यातायात को उत्तम साधन यदि तपाईं एक कार भाँडा छैन छैन ट्रेन द्वारा जानुहोस्। यातायातको साधनले तपाईंलाई एक दिनको एक्लै यात्रा गर्न अनुमति दिन्छ। त्यहाँ दुबै शहरहरू जोड्ने उच्च-गति ट्रेनहरू छन् फ्लोरेन्स मार्फत.
यस अन्य शहरबाट तपाईं एक क्षेत्रीय ट्रेन लिनुहुन्छ जुन एक घण्टा डेढ घण्टा लिन्छ र क्षेत्रीय सेवाको लागिeur यूरो लाग्दैन जबकि सब भन्दा छिटो १० भन्दा बढि युरो हुन्छ र एक घण्टा भन्दा कम लिन्छ। फ्लोरेन्सबाट यात्रामा जान पनि सम्भव छ।
यो बारेमा छ पिसा क्याथेड्रलको घण्टा टावर र यो प्लाजा डेल डुओमोमा छ। क्याथेड्रललाई क्याडेड्रल डे सान्ता मारिया असुन्टा भनिन्छ र यो एपिस्कोपल सीट हो। यो एउटा रोमान्सिक शैलीको मन्दिर जसको निर्माण १० औं शताब्दीमा शुरू भयो, उही वर्षको लागि भेनिसको बासिलिकामा बाँकी रहेको काम सुरु भयो।
मन्दिर १११ in मा पवित्र गरियो र शताब्दीयौंको दौडान यसमा थुप्रै परिमार्जनहरू भए तर हालको विचित्रको शैली १२ औं शताब्दीदेखि नै आएको छ।
आज क्याथेड्रलमा एक ल्याटिन क्रस रूपरेखा छ एक apse र तीन nave transept को साथ पाँच navy संग तपाईं जब यो प्रवेश मा एक मस्जिद को विशाल आन्तरिक जस्तै देखिन्छ। बाहिर यसको प्रशस्त कांस्य वस्तुहरू, संगमरमर र रंगीन सिरेमिकले सजाइएको छ। योसँग निश्चित मुस्लिम हावा र अद्भुत ठोस कांस्य ढोका छ।
भित्र हेर्नुभयो भने, तपाईंले धार्मिक फ्रेस्कोसहित गुम्बज, पालेर्मो मस्जिदको कोरिन्थी स्तम्भहरू, धेरै कालो र सेतो संगमरमरहरू र मेडिसी कोटसहित सुनको छत देख्नुहुनेछ। एपीएसमा १ 1302०२ देखि क्रिष्ट, सेन्ट जोन इभान्जलिस्ट र भर्जिन मरियमको छवि सहितको विशाल मोजेक छ। मोजेक, बुलपिट र काँसाका ढोकाहरू चर्चले भोगेको ठूलो आगोबाट जोगिए।
र टावर? ठिक छ, हामीले अघि नै भनेजस्तै यो चर्चको घण्टा बन्नेछ जुन तपाईंको भ्रमणको हिस्सा हुनेछ। टावर अफ पिसाको निर्माण ११ 1173 मा शुरू भयो र करीव meters० मिटर अग्लो छ। यो निर्माण गर्ने काम सुरू भएदेखि यता झुकाव भएको छ।
टावरसँग एक छ अन्धा तीराहरू र पन्ध्र स्तम्भहरूको साथ आधार, खुला मेहराइका साथ छ वटा स्तरहरू र अन्तमा बेल टावर। यो ए मार्फत पहुँच गरिन्छ २ 294 steps चरणको आन्तरिक सीढी।
यसको निर्माण १ stages177 वर्षमा तीन चरणमा गरिएको थियो। जब तेस्रो चरण चलिरहेको थियो यसको कमजोर जग र अस्थिर भूमिको कारण झुकाव सुरु भयो। यो राम्रो डिजाइन थिएन र त्यसैले यो प्रसिद्ध भयो। आज आर्किटेक्टहरू भन्छन कि यदि यो अचानक वा छिटो निर्माण गरिएको भए, यो पक्कै पतन भइसकेको हुनेछ। एक शताब्दी भन्दा बढी समयसम्म चलेको तथ्यले भूमिलाई बसोबास गर्न अनुमति दियो।
झुकावलाई सच्याउने प्रयासहरू भए तर उनीहरूले काम गरेनन् र प्रायः केही संशोधनले टावरलाई झुकाव बनाउँदछ। उदाहरण को लागी, जब घण्टा टावर यसको सात घन्टा संग, प्रत्येक एक संगीत नोट संग, समाप्त भयो, १1372२ मा फिर्ता।
२० औं शताब्दीको s० को दशकमा पिसाको टावर साँच्चै खतरामा थियो र सरकारले मद्दतको लागि बिन्ती गर्नुपर्‍यो कि टावर नपरोस् भनेर। विषयवस्तु दुई दशक सम्म चल्यो र अन्तमा १ 1990 XNUMX ० मा जनताको पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। दश बर्षको संयुक्त कार्यले उनीहरूको स्थिरीकरण र २००१ मा पर्यटकहरू फर्कन सक्षम थिए.
सीसालाई काउन्टरवेटको रूपमा काम गर्न बेसमा राखिएको थियो र घन मिटर माटो आधारबाट हटाइएको थियो। जहाँसम्म, २०० वर्ष भित्र यो फेरि हस्तक्षेप गर्नु पर्ने हुन्छ वा यो ढल्नेछ।
आज झुकावको कोण १० छ र कुल 10० मिटर मापन गर्दछ। यो एक वर्गमा उभिएको छ, प्लाजा डे लस मिलाग्रोस, जुन पिसाको टावर, क्याथेड्रल र ब्याप्टिस्टी केन्द्रित छ। गिरजाघर पछि अर्को यसको संग्रहालय र कब्रिस्तान छ कि हामी यात्रा को सिफारिश।
टाढाको पिसामा जानलाई तपाईले के थाहा पाउनुपर्दछ? टिकटको मूल्य १eयूरो छ। यदि तपाइँको विचार सिder्गा चढ्नु पर्छ भने घण्टा टावरमा तपाईलाई अनलाइन खरीद गर्नका लागि यो धेरै सुविधाजनक छ किनकि तपाईले एक पास सुरक्षित गर्नुभयो। Years बर्ष मुनिका बच्चाहरु चढ्न सक्दैनन्।
टावर खुल्छ बिभिन्न कार्यक्रम बर्षको समय अनुसार:
नोभेम्बरदेखि फेब्रुअरीसम्म यो बिहान :9: to:45 देखि साँझ 5:१:15 सम्म र नोभेम्बर १ बिहान 1 देखि साँझ9सम्म खुल्छ।
डिसेम्बर देखि जनवरी सम्म यो बिहान १० देखि साँझ 10 सम्म खुल्छ। To देखि From सम्म यो साँझ 5: .० सम्म र डिसेम्बर २१ देखि5सम्म साँझ। सम्म खुल्दछ।
मार्चमा यो २rd देखि बिहान 23 देखि साँझ9सम्म, २rd देखि २ between र between सम्म साँझ and सम्म र th० देखि बिहान :6: .० र 23 सम्म खुला रहन्छ।
अप्रिल देखि सेप्टेम्बर बिहान to देखि साँझ open सम्म खुला हुन्छ। जुन १9र अगस्ट 8१ बीच बिहान :17::31० देखि १० बिहान खुल्छ र जुन १ 8 मा यो बिहान :30::10० देखि 16::8० बिहान खुल्छ। जुन १ On मा यो बिहान :30::5० देखि pm::30० सम्म खुल्छ र अक्टोबरको महिनाको बिहान 16 देखि साँझ 8 सम्म खुल्दछ।
स्पष्ट रूपमा, क्लासिक फोटोले टावरलाई समातेर तपाईं यो गर्न रोक्न सक्नुहुन्न।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » इटाली » पिसाको टावर